5 Semalt को समर्पित SEO ड्यासबोर्डको केसहरू प्रयोग गर्नुहोस्
Semalt को समर्पित SEO ड्यासबोर्ड डिजिटल मार्केटिंगको संसारमा अर्को ठूलो कुरा हो। उनीहरूको एसईओ प्रयासहरू बृद्धि गर्न विश्वभरका सयौं मार्केटरहरू र ब्रान्डहरू द्वारा प्रयोग भैसकेको छ, Semalt DSD ले निरन्तर ग्राहकहरूलाई उनीहरूको वेबसाइटहरूले जैविक खोजीमा कसरी प्रदर्शन गर्छ भन्ने बारे गहिरो दृष्टिकोण लिन सक्षम पारिएको छ।
जबकि Semalt ले पहिले नै AutoSEO र FullSEO जस्ता उपकरणहरू प्रयोग गरेर यसको प्रतिस्पर्धालाई ओसस्टर्माटेड गर्यो, DSD प्रस्ताव विभिन्न तरिकामा अद्वितीय छ। शुरुवातकर्ताहरूको लागि यो अंग्रेजीमा मात्र उपलब्ध छैन तर फ्रान्सेली, इटालियन, स्पेनिश, टर्की, र अधिक जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय भाषाहरूमा पनि उपलब्ध छ। Semalt लाई विश्व भरको वेबसाइटहरूमा DSD लाई विस्तार गर्न यो नै सक्षम गर्दछ।
त्यसोभए, Semalt को समर्पित SEO ड्यासबोर्डको केहि प्रयोग केसहरू पत्ता लगाउन आज केहि समय लिनुहोस्। यी वास्तविक जीवन उदाहरणका साथ हामी यो जान्न सक्दछौं कि कसरी ब्रान्डले यस तारा उत्पादनको फाइदा उठाउँछन्। Semalt DSD को प्रभाव हेर्न हामी भाषाहरू र देशहरू - हामी पाँच विभिन्न प्रयोग केसहरू मार्फत जान्छौं।
(जब हामी यी केस स्टडीहरूमा हेर्छौं, Semet अफिसमा घुम्ने हाम्रो पाल्तु जनावर टर्बोलाई हाई भन्न नबिर्सनुहोस्।)
Semalt DSD को केस स्टडी
पाँच केस स्टडीको द्रुत सूची जहाँ Semalt को समर्पित SEO ड्यासबोर्डले ब्राण्डलाई एसईओ मा अधिक उचाइ हासिल गर्न मद्दत गर्‍यो उच्च ट्राफिक, राम्रो नेतृत्व, र उच्च बिक्री प्राप्त गरेर।
१ सेन मार्केटिंग
सेनेगल एजेन्सी सेन मार्केटिंगको लागि यो ड्यासबोर्ड मुख्यतया फ्रान्सेली भाषामा छ। यसले एजेन्सीलाई फ्रान्सेली र अ English्ग्रेजी बोल्ने ग्राहकहरूलाई उनीहरूको वेबसाइटहरूको विश्लेषण गर्न आकर्षित गर्दछ। र राम्रो कुरा?
DSC को साथ सुरू गर्न यसले एजेंसीको मात्र १० डलर खर्च गर्‍यो। कती राम्रो छ?
एक ड्यासबोर्ड कल्पना गर्नुहोस् कि Ahrefs, SEMRush, र UberSuggest को शक्ति एकसाथ जोड्दछ। थप, यसले Semalt का उपकरणहरू द्वारा गरिएको SEO को प्रभाव प्रदर्शन गर्न सुन्दर ग्राफ र तालिकाहरू पनि उत्पन्न गर्दछ।
तल सेन मार्केटिंगको लागि ड्यासबोर्ड कस्तो देखिन्छ त्यसको स्क्रीनशट तल छ।
फिगर १ - सेटल्ट DSD को विस्तृत DASHBOARD ईन्टरफेस जाँच गर्नुहोस्।
२. भिडियो वेब एसईओ
यो एजेन्सी युक्रेनमा आधारित छ। फोकस यहाँ एक दर्जन भन्दा बढी भाषाहरू मा छ जुन ड्यासबोर्ड उपलब्ध छ। कल्पना गर्नुहोस् कि तपाइँको ग्राहकको लागि उनीहरूको वेबसाइटमा उनीहरूको मातृभाषाको प्रदर्शन परिणामहरू जाँच गर्न कत्ति सुविधाजनक हुन्छ?
त्यो Semalt को समर्पित SEO ड्यासबोर्डको शक्ति हो। तलको स्क्रीनशटमा, भाषा अंग्रेजी हो। तर ड्यासबोर्ड अन्य भाषामा उपलब्ध छ जस्तै डच, स्पेनिश, पोर्तुगाली, र इटालियन।
Semalt अझ अधिक अनुवाद अनुवाद को लागी अनुमति दिन्छ। तपाईं भर्खर ग्राहक समर्थनको साथ सम्पर्कमा रहनुपर्नेछ र अनुवाद एक क्षणमा गरिन्छ।
छवि २ - WEO WEB SEO भाषाहरूको विविधतामा फोकस गर्दछ
Local. स्थानीय नाडी मार्केटिंग
यो एरिजोनामा आधारित एजेन्सी यसको ड्यासबोर्ड इटालियन भाषामा फ्ल्यास गर्न छनौट गर्दछ। तर ध्यान SERP चाल र सामग्री विश्लेषणमा केन्द्रित छ, जुन तपाईले बायाँ कुनामा देख्न सक्नुहुन्छ। ग्राहकले भर्खर आफ्नो वेबसाइटको URL प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ र उनीहरूले उनीहरूको प्रदर्शनको बारेमा विस्तृत जानकारी हेर्न सक्नेछन्।
SERP विवरण एक कदम अगाडि जान र सबै कुञ्जीशब्दहरू जो ग्राहकको व्यवसायको लागि महत्वपूर्ण हो को लागी जैविक खोजी मा क्रमबद्ध देखाउँदछ। SERPs मा पनि, यसले शीर्ष कुञ्जी शव्दहरू, उत्तम पृष्ठहरू, र प्रतिस्पर्धीहरू देखाउँदछ। तपाईको साधारण उपकरण वा ड्यासबोर्डमा फेला पार्ने जस्तो यस्तो केही छैन। अह्रेफ र SEMRush जस्ता अनुप्रयोगहरूको मासिक सदस्यता छ।
र Semalt मात्र १० पाउन्डको लागि यो उपकरण प्रदान गर्दछ। अनुवाद मा, यो लगभग शुल्क तपाईं एक दिन लायक Ahrefs को लागी तिर्नुहुन्छ।
चित्र3- स्थानीय पुल मार्केटि I यसको DSD संस्करणको लागि एक मूल गृह भाषा छ।
The. अनलाइन कारखाना
अर्को उदाहरण दुबईमा आधारित एजेन्सी हो जुन अमेरिकी कम्पनीहरूले भारतमा उनीहरुलाई एक ग्राहक रैंकिंगको गर्व गर्दछ। तिनीहरूको आधारभूत ड्यासबोर्ड अंग्रेजीमा छ, तिनीहरूको विश्वव्यापी ग्राहकहरूको कारण।
तिनीहरूको ग्राहकलाई केवल आफ्नो वेबसाइटको युआरएल वा पृष्ठ विश्लेषण गर्न पेज चाहिन्छ र ड्यासबोर्डले ताजा र अद्यावधिक अन्तर्दृष्टि दिन्छ।
वेबपृष्ठ विश्लेषक एक उपयोगी उपकरण हो जसले ग्राहकलाई पृष्ठमा के गलत र सही के हो बुझ्न दिन्छ। यी सामग्री समस्याहरूदेखि टेक्निकल त्रुटिहरू पृष्ठ स्पीड अन्तर्दृष्टि सम्म पर्दछ। यो जस्तोसुकै भए पनि, Semalt को DSD ले समाधान वा तरिका प्रदान गर्ने छ जुन उनीहरूले यसलाई समाधान गर्न सक्दछन्।
फिगर4- अनलाइन कारखाना यसको ट्रिपलमा संगठित गरिएको छ पुनर्जीवित अवस्था यो आफ्नै DASHBOARD सुरु भयो
Semalt DSD को सामर्थ्यको प्रदर्शन गर्ने अर्को उत्कृष्ट उदाहरण मार्सेलिनोको ड्यासबोर्ड हो। यो सूचीमा अरूसँग समान छ केवल भिन्न भिन्नताले भाषा समर्थन सीमित छ। अब यो सजिलै DSD पोर्टलमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ, जसले तपाईंलाई लोगो र ब्रान्डि adding थपेर सम्पूर्ण ड्यासबोर्ड सम्पादन गर्न अनुमति दिन्छ।
यो Semalt DSD को कुरा आउँदा आँखालाई भेट्ने बाहेक अरू पनि धेरै चीजहरू छन् जुन यस उदाहरणमा प्रस्ट देखिन्छ।
आकार5- मार्सलिनोले क्लाइन्ट कोपेरेशन सिमेन्टलमा सेमेल्ट डीएसडी प्रयोग गर्ने उत्कृष्ट उचाइहरू छ।
Semalt को समर्पित SEO ड्यासबोर्ड का मुख्य सुविधाहरू
अब जब तपाइँ Semalt को SEO ड्यासबोर्ड का केहि राम्रा उदाहरणहरु देख्नु भएको छ, यसका केही प्रमुख सुविधाहरुमा एक नजर राखौं। यसले तपाईंलाई निर्णय लिन मद्दत गर्दछ:
एक केन्द्रीय ड्यासबोर्ड जुन Ahrefs, SEMRush, र Ubersuggest को संयोजन गर्दछ
तपाईंको आफ्नै डोमेनमा चलाउन सकिन्छ
ब्रान्डि and र लोगो समर्थन निजीकृत
गुगल एसईआरपी विश्लेषण, टेक्निकल एसईओ अडिट, र एसईओ रिपोर्टहरू एक बटन क्लिक गर्नुहोस्
DSD प्रशासन प्यानल मार्फत अनुकूलन मा पूरा नियन्त्रण
Semalt पुनर्विक्रेता कार्यक्रममा पहुँच
Semalt DSD प्रयोगका फाइदाहरू
तपाईंको संरक्षकहरूलाई सबै-इन-वन टूलकिट प्रदान गरेर बिक्री र आय बढाउनुहोस्
बृहत SEO विश्लेषक उपकरण जसले नयाँ ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्दछ
ग्राहक साझेदारी मजबूत बन्छ
तेर्सो-पार्टी एपीआईहरूमा निर्भर हुन आवश्यक पर्दैन जुन कायम राख्न गाह्रो छ
प्लेटफर्म मर्मतका लागि आवश्यक पर्दैन। Semalt DSD को ब्याकइन्डको ख्याल राख्दछ
Semalt पुनर्विक्रेता प्रोग्राम प्रयोग गर्नुहोस् तपाईको बिक्रीलाई गगनचुम्बी बनाउन
सँगैका, यी सुविधाहरूले तपाईंलाई तपाईंको एसईओ प्रयासहरू सशक्त बनाउन र तपाईंको स्थानीय मार्केटिंग संसारमा नेताको रूपमा उभिन मद्दत गर्दछ। अनुभवले हामीलाई भन्दछ कि ब्रान्डहरूले एजेन्सीहरूसँग काम गर्न मनपराउँदछन् जुन उनीहरूका स्वामित्व उत्पादहरू र उपकरणहरू छन्। ठिक छ, Semalt को DSD यो सुनिश्चित गर्नका लागि एक उत्तम तरिका हो कि तपाईका ग्राहकहरूले तपाईले देख्न चाहानु भएको सामानहरू मात्र देख्दछन्, तपाईंको ब्रान्डि and र नियन्त्रणको साथ पूर्ण।
तपाइँको Semalt DSD यात्रा आज शुरू गर्नुहोस्, यहाँ कार्यक्रमको लागि साइन अप गर्नुहोस्।